Kadib bar barihii ay gashay kooxda Manchester United ma ogtahay in ay marayso xaaladii ugu xumayd 36 Sano kadib | Baydhabo Online
Kadib bar barihii ay gashay kooxda Manchester United ma ogtahay in ay marayso xaaladii ugu xumayd 36 Sano kadib
Manchester United ayaa kulankii xalay ay la yeelatay dhigeeda West Ham United ka sameeysay Rikoodh aad u Liita, kadib markii ay kula gashay garoonkeeda “Old Trafford” barbaro 1-1 ah, mid ka mid ah kulamadii 13aad ee horyaalka Premier League.
Bar-barihii xalay ayaa waxay ka dhigan tahay in kooxda Manchester United ay ku guuldareysatay in wax guul ah ay ku gaarto garoonkeeda “Old Trafford” 4 kulan oo xiriir ah, waana kulamada, Stoke City, Burnley, Arsenal iyo kii xalay ee West Ham oo dhamaan ay barbaro kula gashay garoonka “Old Trafford”.
Man United ayaa bar-baro ku gashay garoonkeeda Old Trafford afar kulan oo xiriir ah horyaalka markii ugu horreysay tan iyo bishii December sanadkii 1980-kii.
>- 22 baas kaddib ayuu yimid goolkii ay Man United ku barbareysatay ciyaarta kulankan oo uu u dhaliyey Zlatan Ibrahimovic, kaliya waxaa ka badan baasaska ay xiddigaha Chelsea isku dhiibeen goolkii Eden Hazard uu ka dhaliyey kooxda Everton oo yimid 23 baas kaddib.
In kooxda Manchester United ay 8 dhibcood ku lumiso 4 kulan oo xiriir ah ay ku ciyaartay garoonkeeda “Old Trafford”, ayaa ku qasbeysa inay kasoo muuqato booska 6aad ee dhanka kala sareynta horyaalka Premier League iyagoo 13kii kulan ee lasoo ciyaaray ka aruursaday 20 dhibcood, waxayna 11 dhibcood kor ugu eegayaan hogaamiyayaasha horyaalka Premier League ee Chelsea